Barre Hiiraale Oo Yiri Waan Xirnay Albaabkii Colaada Kan Nabdaan Hada Furmay +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barre Hiiraale Oo Yiri Waan Xirnay Albaabkii Colaada Kan Nabdaan Hada Furmay +COD
Ka gadaal markii gelinkii dambe ee maanta Korneyl Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) uu soo gaaray Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu durbaba ka soo muuqday Saxaafada, isagoona sheegay in uu nabadda qaatay.
Barre Hiiraale wuxuu la socday diyaarad gaar ah oo galabta Magaalada Kismaayo ka soo qaaday Wasiiro ka tirsan Xukuumada Somaliya, oo maalmahaanba booqasho ku joogay Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha ee Xukuumada Somaliya iyo Korneyl Barre Aadan Shire, ayaa waxay shir jaraa’id ku wada qabteen Garoonka Aadan Cadde, oo soo dhaween loogu sameeyay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo hadalka ku horeeyay, ayaa sheegay in ay ku guuleysteen tallaabadii 1-aad, ee ay horey ugu dhaqaaqeen sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa beelaha ku dhaqan Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Wasiirka waxa uu Barre Hiiraale ku ammaanay in uu ka aqbalay, markii ay u soo bandhigeen in uu ka qayb qaato dadaalada lagu doonaayo, in dib u heshiisiin loogu sameeyo bulshada ka soo jeedo Jubbooyinka iyo Gedo.
Korneyl Barre Hiiraale, ayaa waxa uu dhankiisa ku dhawaaqay in uu dhamaaday waqtigii dagaalka, isla-markaana uu bilowday bogga nabadda, isagoo sidoo kalana sheegay in uu nabadda ka shaqayn doono.
Hiiraale waxa uu ku baaqayaa in laga wada qayb qaato nabadda Gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Gedo iyo dhammaan qaybaha kale ee dalka.
Sarkaalkaan, ayaa Khamiistii ka biyo diiday in hub ka dhigis lagu sameeyo Xoogagiisii, xilli Arbacadii loo sheegay in la soo dejin doono Kismaayo, iyadoo aan hubka laga qaadi doonin.
Wasiirada soo galbisay Barre Hiiraale, ayaa waxay u soo bandhigtay in la geeyo Magaalada Muqdisho, isla-markaana hub ka dhigis lagu sameeyo Xoogagiisii, markii uu dalabkaasi ka yimid Maamulka Jubba iyo Ciidamada Kenya ee Kismaayo ku sugan.